Wasiirka Warfaafinta oo sheegay in dowladda aan aqbali doonin in la siyaasadeeyo howlgalka xasalinta Caasimadda | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wasiirka Warfaafinta oo sheegay in dowladda aan aqbali doonin in la siyaasadeeyo...
Wasiirka Warfaafinta oo sheegay in dowladda aan aqbali doonin in la siyaasadeeyo howlgalka xasalinta Caasimadda
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo howl galada Xasilinta Caasimadda Muqdisho, isagoo xusay inay jirana dad cabashi ka keenay arrinta hub ka dhigista.
Wasiir Yariisow oo ku sugan Nairobi ayaa wareysi uu siiyay mid ka mid Muuqbaahiyasha Af-ka Soomaaliga ayaa sheegay in la aqbali doonin cid alla cidii ka hor timaada ama isku dayda xasilinta Caasimadda, isla markaana aan cidna looga aaba-yeeleyn.
Waxaa tilmaamay in Ciddii ka hor timaada, ama isku dayda inay ka dhega adeegto xasilinta Caasimada iyo amni soo celinta ama siyaasaneyneysa aan Xukuumadda Soomaaliya ka yeeli doonin.
Waxaa uu sheegay in dowladda sharciyad loo siiyay, in dalka amnigiisa la soo celiyo, isagoo tilmaamay in aanay jiri karin cid ku marmarsiyoon karta magac beel aanu jiri doonin.
“Dowladda sharciyad ayaa loo siiyay in dalka amnigiisa la soo celiyo, cid looga aabayeelayo ma jirto, cid ku owr-kacsan karta ma jirto, beelo iyo wax kale. Xukuumadda waxaa ka go’an in dhaqankii hore wax laga bedelo, dhaqan fowdo iyo in caasimada amnigeeda la soo celin waayo, mar dambe in la maqlo ma rabo, cid alla cidii rabta ee ku nooleyd fowdada, walina rabta fowdada, is bedelka diidan, waxaa dan idin ku jirtaa is bedelka, intaa fiirineysaan dan shaqsiyadeed waxaa ka muhiimsan danta shacabka”ayuu yiri Wasiir Yariisow.
Mar uu ka hadlayay dilalka ka dhaca Muqdisho ayuu sheegay in qiimeyn la sameeyay lagu ogaaday in inta badan dilalka aanay Shabaab ka dambeyn.
“Qiimeyn la sameeyay dilalka ka dhaca Muqdisho waxaa lagu ogaaday in aysan inta badan Al-Shabaab ka dambeyn, oo ay waxyaabo kale ay ku lug leeyihiin”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dad badan hubkooda ay kala carareen magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay in dowladda ay ka daba tagi doonto gobol iyo degmo meesha lala aadayo, cid laga yeelanaya aanay jirin.
Hadalkan ka soo yeeray Wasiirka Warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, ayaa ku soo aadaya iyadoo siyaasiyiin iyo dad kale oo horay xilal u soo qabtay ay ka digeen qorshaha hub ka dhigista ee ka socota Muqdosho.
Previous articleWeerar dhanka internet-ka ah oo lagu qaaday mas’uuliyiin ka tirsan dalalka Baxrayn iyo Imaaraadka
Next articleReal Madrid oo ku guulaysatay Koobka Champion League: sawiro